Nolazain’i Yahoo Ny Fangataham-Panesoram-Botoaty Voalohany Avy Amin’ny Governemanta Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2016 9:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, عربي, русский, English
Sambany nitatitra ny Yahoo fa nahazo fangatahana hanaisotra lahatahiry avy amin'ny manampahefana rosiana. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Navoakan'i Yahoo, orinasa amerikana iraisampirenena eo amin'ny sehatry ny aterineto sy ny teknolojia, ny tatitra fangaraharana farany, milaza ny isan'ny fangatahan'ny governemanta hanaisotra lahatahiri-mpiserasera na votoaty ankapobe avy amin'ny mpiserasera nandritra ny tapa-taona faharoan'ny 2015. Sambany i Yahoo nitatitra ho nahazo fangatahana fanesoram-botoaty avy amin'ny governemanta rosiana.
Hita ao amin'ny tatitry ny fangaraharana fa nametraka fangatahana enina hanesorana votoaty ny sampan-draharaham-panjakana rosiana teo anelanelan'ny volana jolay ka hatramin'ny desambra 2015. Ny fangatahana dia niompana tamin'ny lahatsoratra enina samy hafa avy amin'ny mpiserasera ao amin'ny tranonkalan'ny Yahoo. Nilaza ny Yahoo fa nanaiky tamin'ny fanesorana ny 33%-n'ny fangatahana. Mifangarika amin'izany kosa dia tsy naharay fangatahana hamoahana lahatahirin'ny mpiserasera avy amin'ny manampahefana kosa ny orinasa.
Na dia tsy nanome ny antsipirihan'ny raharaha tsirairay aza i Yahoo izay nanaovana ny fangatahana fanesoram-botoaty, dia noravahany an'ohatra sasantsasany kosa hoe inona avy ireo nangatahan'ny governemanta ho esorina. Eto ambany eto ny ohatra fandravahana ho an'i Rosia tamin'ny tapa-taona faharoan'ny 2015.
Rosia – nahazo fangatahana avy amin'ny governemanta rosiana izahay hanakana ny fidirana ao Rosia ny lahatsoratra iray ao amin'ny Vondrona Yahoo, satria io lahatsoratra manokana io dia nolazaina fa votoaty voarara araka ny didim-pitsarana rosiana. Nanaisotra io lahatsoratra manokana voalaza io izahay rehefa avy namaritra fa ahitana fandrahonana herisetra miharihary ao anatiny, ary manitsakitsaka ny fifanarahana amin'ny fampiasana ny tolotry ny Yahoo izany.
Rosia – nahazo fangatahana roa avy amin'ny governemanta rosiana izahay hanakana ny fidiran'ny sary Flickr anankiroa, amin'ny filazana fa ireo sary ireo dia ahitana sary vetaveta. Nitsipaka ireo fangatahana ireo izahay rehefa avy namaritra fa tsy manitsakitsaka ny Torolalan'ny Vondrompiarahamonina Flickr izy ireo.
Firenena roa hafa ihany koa, ankilan'i Rosia, no nametraka fangatahana hanaisotra votoaty navoakan'ny mpiserasera tamin'i Yahoo nandritra ny tapany faharoan'ny taona 2015. Nametraka fangatahana enina ihany koa i India, ary nanaiky ny hanaisotra ny 50%-n'ny fangatahana ny Yahoo. Nametraka fangatahana fanesorana votoaty telo i Etazonia, ary ny iray tamin'ireo ihany no neken'ny orinasa.
Natamberin'ny Yahoo ny fangatahan'ny governemanta te-hahazo fampahafantarina na hanaisotra votoaty mifanaraka amin'ny fotokevi-dehibe napetraky ny orinasa, fotokevi-dehibe mifototra amin'ny fanakelezana araka izay tratra ny “famoahana ny lahatahirin'ny mpiserasera sy ny fanakatsakanana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera,” miaro “ny zon'olombelona, ka tafiditra amin'izany ny zo hiaina an-takonana [hanana fiainana manokana] sy fahalalaham-pitenenana,” ary “hametraka ny tamberin'andraikitra sy ny mangarahara” amin'ny tolotra ho an'ny mpiserasera.
Tamin'ny fiandohan'ity volana marsa ity ihany koa ny tolotra famahanam-bilaogy fohy Twitter no namoaka ny tatitra fangaraharana, izay mampiseho fa nitombo 25 avo heny [mg] ny isan'ny fangatahan'i Kremlin hanaisotra votoaty tamin'ny tapany faharoan'ny taona 2015, raha oharina tamin'ny vanim-potoana teo aloha. Tanelanelan'ny volana jolay ka hatramin'ny volana desambra 2015 ny sampan-draharahan'ny governemanta rosiana nametraka fangatahana fanesoram-botoaty miisa 1735 avy amin'ny Twitter—mampitombo in-25 noho ny fangatahana tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2015, ary mampitombo in-19 noho ny tamin'ny tapany faharoan'ny taona 2014.